September 2009 edited September 2009 in Tech News
ဒါက သူများsite မှာရေးထားတာကို ပြန်တင်ပြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ site အတွက် အထောက်အကူဖြစ်အောင်ပါ။ ရိုးရိုးသားသား၀န်ခံတာနော် ကူးချတာလို့။:D:D:P
အော်.... resource ပြောရဦးမယ်
ကျွန်တော်၀န်ခံတယ်နော် admin ကဖျက်မချရင် တွေ့ရမှာပါ အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ:D:)):))
asoka နော်.............. ဟွန်းဟွန်း........ ကိုရေလိုအေးက လိုက်ရိုက်လိမ့်မယ်နော်........ ဟီးဟီး...
မ​ရ​ဘူး​ဗျို့။ အစ်ကို ပြောထား​တဲ့ C:\_windows\_system32 ထဲ​မှာ အဲ​ဒီ​ဖိုင် နှစ်​ဖိုင် မ​ရှိ​ဘူး ခင်​ဗျ။ အဲ​ဒါ​ဖိုင်​တွေ​ကို ဘယ်​နေရာ​မှာ ထပ်​ပြီး သွား​ရှာ​ရ​မ​လဲ။
There is it fri! maybe you overlook it. try again!